स्टेफनी मेलरको गायब हुनु, जोल डिकरको फिर्ती | वर्तमान साहित्य
स्टेफनी मेलरको बेपत्ता।
२०१ 2018 मा सुरू भयो, स्टेफनी मेलरको बेपत्ता यो लेखक जोल डिकरको सबैभन्दा उल्लेखनीय पुस्तक भएको छ। युवा स्वीस लेखकले फेरि आफ्नै शैली प्रदर्शन गरेको छ, केहि अनुच्छेदहरू पढेर पहिचान गर्न सकिन्छ। काममा रूपमा वा अधिक उत्साहजनक ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता, जुन, ठूलो सफलता प्राप्त पछि, एक प्रमुख चुनौती थियो।
तसर्थ, स्टेफनी मेलरको बेपत्ता नयाँ मिलेनियमको जासूस उपन्यासहरूको सबैभन्दा प्रख्यात फ्रान्सोफोन लेखकको रूपमा डिकरको पुष्टिकरण प्रतिनिधित्व गर्दछ।। यो एक कथा विधा हो जुन सोफोकल्स र उसको ओडिपस रेक्सको समयदेखि नै आएको छ। यद्यपि यसको वास्तविक "बूम" १-औं शताब्दीको बीचतिर एडगर एलन पोको र पछि अगाथा क्रिस्टीको हातबाट शुरू भयो।
1.1 हाम्रा अभिभावकको अन्तिम दिनहरू र ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता
2 संक्षेपमा स्टेफनी मेलरको बेपत्ता
2.1 समयको बिरूद्ध दौड
2.2 धेरै रहस्यहरू, अघि र पछाडि (वा अब)
3.2 वा सानो काम?
3.3 (बस) मनोरञ्जन को दुविधा
जुन १va, १ 16 1985 मा जेनेभामा जन्म, जोल डिकर ऊ लाइब्रेरियन र फ्रान्सेली शिक्षकको छोरो हो। यसले - स्विट्जरल्याण्डको फ्रान्सेली भाषी शाखामा बस्दै - "प्रेमको भाषा" को लागी आफ्नो प्राथमिकता शर्त गर्‍यो। लेखनको लागि उनको दृष्टिकोण जनावरप्रतिको उनको उत्कटतालाई धन्यवाद दियो।
१० बर्ष उनले स्थापना गरे गजेट डेस एनिमेक्स (पशु पत्रिका); उनले यसलाई सात बर्ष सम्म निर्देशित गरे। पछि, उनले छोटो कथा भनिने प्रतियोगितामा प्रवेश गरे एल Tigre। प्रतिस्पर्धी न्यायाधीशहरूका अनुसार, यस्तो राम्रा लेखिएको पाठलाई १ years बर्ष उमेरका मात्र कसैले लेख्न असम्भव थियो। अन्तत:, फिनलको बारेमा पाठ युवा फ्रान्सोफोन लेखकहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार संग मान्यता प्राप्त भयो।
हाम्रा बुबाहरूको अन्तिम दिनहरू y ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता
२०० In मा उनले आफ्नो पहिलो उपन्यासको पाण्डुलिपि समाप्त गरे, हाम्रा बुबाहरूको अन्तिम दिनहरू। २०१० मा उनले एक जासूस कथा लेखेका थिए, उनले प्रििक्स डि Éक्टिभेंस जेनेभोज (जेनेभा लेखक पुरस्कार) जीते। शीर्षक अन्ततः बिक्रीमा गयो एन 2012। त्यो वर्षको अन्तमा, डिकरको उपलब्ध जीवनको "वाटरशेड" प्रकाशित भयो: ह्यारी क्युबर्ट केसको सत्यता.
Languages ​​33 भाषाहरूमा अनुवाद, विभिन्न बजारमा पहिलो। जिनेभन लेखकको जासुस कहानी कथनको भित्रबाट शुरुवातले ताजा हावालाई लामो समयको लागि आश्चर्यको अनाथाम उपमन्टरमा ल्यायो। साथै, यो शेरलॉक होम्स वा अगस्टे डुपिन, मार्कस गोल्डम्यान जस्ता नामहरू द्वारा स्टार गरिएको सूची भित्र नयाँ जासूसको लागि प्रवेशद्वार हो।
स्टेफनी मेलरको बेपत्तासंक्षेपमा
दुई समाधान नगरिएका अपराधहरू, दुई र एकल प्रहरी अधिकारी बीच २० बर्षको दूरी सबै कुरा स्पष्ट गर्न: जेसी रोजेनबर्ग। उहाँ १ 1994 XNUMX since देखि न्यूयोर्कका एक प्रख्यात अधिकारी हुनुहुन्छ, जब - एक नौसिखाहरूका रूपमा - उनले आफ्नो साथी डेरेक स्कटसँग द हेम्पटन, ल Long्ग टापुमा एकल अपराधको समाधान गरे।
जब तपाईं रिटायर हुनुहुनेछ एक भद्दा पत्रकार स्टेफनी हेलरले उनको पहिलो मुद्दामा सुल्झाइएको नभएको बताउँछिन्। मानौं, उसले धेरै गल्तीहरू गरेको हुनाले उसलाई (वास्तविक) अपराधी भेट्टाए बिना फाइल बन्द गर्न मद्दत पुर्‍यायो। यद्यपि दिग्गज जासूस यी टिप्पणीहरूद्वारा विचलित भएको देखिँदैन, तर उसको भित्री आवाजले उसलाई खाँदछ।
समयको बिरूद्ध दौड
अन्ततः, रोजेनबर्गले आफ्नो दिमाग बदल्छ, अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्दछ। तर उनले यो निर्णय लिने बित्तिकै उसको अभियोग लगाउने व्यक्ति - जसले आफुले वास्तविक अपराधीको बारेमा प्रमाण आफूमा रहेको दाबी गर्छ - कुनै ट्रेस नछोड्दा हराउँछ। त्यसो भएपछि समयको बिरूद्ध दौड सुरु हुन्छ।
पुलिस अफिसरले आफ्नो पत्यारपत्रहरू लिनु अघि ती दुई पहेलाहरूको समाधान गर्नुपर्नेछ। यस कारणले गर्दा, कथा रेखा १ 1994 2014 and र २०१ between बीचको समानतामा चलिरहेछ। रोजेनबर्ग विवेकको साथ शान्तिमा अवकाश लिन चाहन्छ। आफैलाई छुटकारा दिनुहोस्, जे भए पनि ... यो पहिले नै ढिला भयो।
धेरै रहस्यहरू, अघि र पछाडि (वा अब)
डिकरको अपराध उपन्यासहरूको एक स्पष्ट विशेषता तिनीहरूको चरित्रहरू हुन्: तिनीहरू सबैलाई केहि प्रासंगिक जानकारी थाहा छ। कथाको नायक र जनताबाट अज्ञात विवरणहरू। En स्टेफनी मेलरको बेपत्ता मिनेटिया र क्रस सन्दर्भ दुई युगहरूका भाग हुन् आँखा पूरा भन्दा सामान्य चीजहरूमा।
रोजेनबर्गले सामना गरेको उन्मत्त रेस पाठकहरूको लागि सबै रहस्यहरूको अन्तमा पुग्न समान मार्ग हो। अन्तिम पृष्ठमा, शाब्दिक रूपमा। निस्सन्देह प्रहरीलाई जस्तै यस षड्यन्त्रका "साक्षी" सावधान हुनुपर्दछ नाम, मिति र ठाउँहरू भ्रमित न गर्न। अन्यथा, यो रहस्य सुल्झाउने सबै ट्या solve्गलहरू समाधान गर्न असम्भव हुन्छ।
सफलता द्वारा उत्पादित ह्यारी क्युबर्ट केसको बारेमा सत्यता प्रभावित भएको छ, अझ राम्रो र खराबको लागि, जनताको प्रतिक्रियालाई स्टेफनी मेलरको बेपत्ता. एकातिर, प्रकाशकहरू अत्यन्त सन्तुष्ट थिए किनभने माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिलाई दिएपछि यो उपन्यास द्रुत व्यावसायिक हिट भयो। यसको प्रकाशन हुनुभन्दा अघि पनि, संख्याहरू पहिले नै हरियोमा थिए।
वा सानो काम?
तर जनताको एक राम्रो हिस्सा बाट आएको प्रतिक्रिया नकारात्मक मात्र अन्त भयो। डिकरका फ्यानहरूले जोखिमपूर्ण र समान मापनमा मनोरन्जन गर्न सक्षम लेखकको लक्षणहरू पहिचान गरे। यद्यपि "फेन्डम" भित्र नै निराशाको आवाजहरू थिए, जुन कथालाई ढिलो, घना र ईश्वरभ्रष्ट भनि ब्रान्ड गरिएको।
असन्तुष्ट पाठकहरूको रायको साथ स्टेफनी मेलरको बेपत्ताकम दुखद अनुभव ती व्यक्तिलाई थियो जसले यस उपन्यासको साथ फेसनशील फ्रान्सेली भाषी लेखक फेला पारे। यद्यपि साहित्य फोरमहरूमा उपन्यासको धेरै बमब्यास्ट वा अत्यधिक उत्साहजनक समीक्षाहरू छैनन्।
(बस) मनोरञ्जन को दुविधा
यो दुविधा हो कि यसले लेखक र पाठकहरूलाई चिन्तित तुल्याउँछ। प्रश्न के त्यहाँ मनोरञ्जन मा केहि गलत छ? केवल दर्शकहरूलाई मनोरन्जन प्रदान गर्ने लेखकहरूलाई तुच्छ ठान्नु पर्छ? यो सर्वसम्मत प्रतिक्रिया बिना एउटा विषय हो जहाँ सबै पदहरू वैध छन्। जहाँसम्म, सामान्यतया कलाको बीचमा, दर्शकहरूको मनोरन्जन गर्नु तपाईंको सोचे भन्दा धेरै गाह्रो हुन्छ।
"समस्या" यो हो कि कलात्मक अभिव्यक्तिहरू अत्यन्त दिखावापूर्ण हुन्छन्। "बस मनोरञ्जन", Oedipus Rex को समय देखि, एक प्रतिष्ठित चक्कर देखिन्छ, परीक्षकहरुको। तर धेरै लेखकहरू वा कलाकारहरू त्यो क्षमता चाहन्छन्। र डिकरको सन्दर्भमा, यस प्रक्रियामा लाखौं प्रतिहरू बिक्रि गर्दै।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » स्टेफनी मेलरको बेपत्ता